တစ်အိမ်လုံးကိုပါကေးခင်း ထားပြီး၊ Master Bed Room နှင့် Shower Bath Room ပါရှိပီး Myanmar Plaza အန...
ရောင်းပြီး / ငှားပြီး - မြေကွက်၊ခြံ - လှည်းကူး
အကျယ် - ၁၀ဧက စျေးနှုန်း - သိန်း ၃၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် - 095099152, 09974728...
10 Acres ft2
ရောင်းပြီး / ငှားပြီး - ကွန်ဒို - ရန်ကင်း
ရန်ကင်မြို့နယ်ရှိ ဘောက်ထော်ဈေးအနီး,မိုးကောင်းဘုရားအနီး တွင် Condo6floor ဌားရန်ရှိပါသည် ။
ရောင်းပြီး / ငှားပြီး - စက်မှုဇုန် - ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ပင်လုံလမ်းမရှိ ငှားရန်ရှိသ...
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ပင်လုံလမ်းမရှိ မြေအကျယ် (45x60) ၊ ဂိုဒေါင်သစ်အကျယ် ( 40x50) ၊ ရေမီး၊ Hall type ၊...
Beautiful House for Sale - in Parami, Myintzu...
Beautiful2and Hlaf Storey Home with Fully Furnished. Lift, 10 Air Conditions. Mini Bar,...
ရောင်းပြီး / ငှားပြီး - တိုက်ခန်း - ဒေါပုံ
ပေးရသောစေ ျးနှင့်တန်သော စိတ်ကေ ျနပ်မှုရရှိစေသောတိုက်ခန်းရောင်းရှိသည်။
Ko Shwe Htoo cont...
မြေညီထပ်ဖြစ်သည့်အတွက်ဘိုးဘွားတွေအတွက် သွားလာရေးအဆင်ပြေပါတယ် မှတ်တိုင်နှင့်နီးသောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သ...
ကွန်ဒို(A) , မင်းဓမ္မလမ်း ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တွင်ရှိသော အိပ်ခန်း ( ၃) ခန်းပါ၀င်သည့် ထုူး မင်းဓမ္မကွ...